Hiran State - News: Dalka Bosniya xiligii uu dagaalka ka socday waa laga hortagay in shacabku ay wadankooda ka baxaan laakinse Somaliya yaa u maqan.
Dalka Bosniya xiligii uu dagaalka ka socday waa laga hortagay in shacabku ay wadankooda ka baxaan laakinse Somaliya yaa u maqan.
Somalia:-Shacabka Somaliyeed oo xerooyin waaweyn looga sameeyey Kenya iyo Ethiopia ayaa u muuqda kuwo dalkooda sidaas ugu tagi doona hadaan lagu quudin gudaha dalka Somaliya halkii lagu qasbi lahaa iney wadankooda ka hayaamaan. qorshahan oo ay hada ka hor aduunyada la damacsaneyd wadanka Bosniya 1994-kii markii uu dagaal ka qarxay wadankii Yogoslavia,iyadoo xiligaasi in shacabka dhulkooda laga qaado ay diideen hogaamiyaal uu ka mid ahaa madaxweynaha dalka Libiya Qadaafi oo ku taliyey in wadankooda lagu quudiyo waxii dhimasho ka badbaada isagoo si aan loo rarin malaayin dolar ku bixiyey shacabka oo Muslin u badnaa oo ay adkaan laheyd iney dib wadanka ay maanta heystaan ee Bosniya ku soo laabtaan.
Hadaba markii ay ururka Shabaab diideen in shacabka Somaliyeed loogu geeyo degaanadooda waxii gargaar ah ayna ka xireen jidadkii ay sahayda u mari laheyd dhamaana dalka ka ceyriyeen hay'ddahii gargaarka waxey aduunyadii go,aansatay in shacabka loogu yeero dalalka Kenya iyo Ethiopia oo Somaliya deris la ah si halkaasi loogu quudiyo iyadoo xerooyin waaweyn looga furay halkaasi.
Aduunyada hadii ay arimaha Somaliya daacad ka tahay intey Shabaab iyo Alqacida bur buriyaan ayey wadanka ku quudin karaan shacabka halkii wadankooda laga xaalufin lahaa. marka arintaan qatarteeda leh waxey u baahan tahay iney shacabka Somaliyeed kuwooda uu wali ku danbeeyo damiirkii Somalinimo iney maskax caafimaad qabto ku eegaan oo dadka ehelkooda ah ku caawiyaan gudaha wadanka halkii ay wadankooda ka hayaami lahaayeen oo berito xuduudaha looga diidi lahaa iney dib ugu soo laabtaan.
Dhinaca kale maadama aysan wadanka ka jirin dowlad dhexe oo dalka hanan karta waa in shacabka iyadoo laga hortagayo iney wadanka ka baxan loogu gargaaro wadankooda. arinta kale ee qatarteeda leh nin reer miyi ah oo Kenya iyo Ethiopia tagay ma laga yaabo inuu dalka dib danbe ugu soo laabto marka sida muuqata Somaliya qatarta ay galiyeen Shabaab iyo hogaamiyaasha maalinkasta caasimada Somaliya isku qabqabsanaya iyadoo ay malaayin Somaliyeed dhamaanayaan wadankiina laga xaalufinayo iyagaa masuuliyada dhibaatada wadanka ku habsatay lagala xaajoon doonaa mustaqbalka.
Waliba Shabaab waxey qorsheyneysaa iney diido in loogu gargaaro gudaha wadanka amaba meelaha ay ka taliyaan hadane aysan daboolin baahida shacbaka oo ay iyaga iyo caruutooda oo kaliya heystaan nolol maadama ay heystaan hantiidii ay shacbaka ka dhaceen ee ay ugu yeerayeen Sakada sidaane mirmirsiyo ugu dhigtaan in aysan shacabku wadanka ka bixin.
Dabcan Shabaab waxey maanta ka qeylineyso waa wax ay iyaga shacabka u geysteen hal mar ayeyna arkeen degaanada ay koofurta Somaliya kaka sugan yahiin oo lagu cidleeyey dadkaasina sidey wadanka ugu baxaan uguma soo laaban doonaan dhamaantood oo hadii ay taasi dhaceyso kuwii qurbaha u qaraxay 21kii sano ee inadhaaftay ayaa la arki lahaa iyadoo wadanka dib ugu soo laabtay oo 5% xitaa ma dhama tirada wadanka dib ugu laabtay oo ka faa'ideysata.
Arinta Somaliya waxey mareysaa Now or Never hadaan maanta xal loo helin in shacabka wadanka sida cilmiyeysan looga saaraa lagu quudin wadankooda si berito looga badbaado qatarta aan waxbo laga qaban karin oo ilaa maanta shacabka reer Falastiin heysata oo maalinkasta loo diido iney wadankooda dib ugu soo laabtaan kedib markii ay sidan ookale ugu carareen waqti hore.
Somalia:-Shacabka Somaliyeed oo xerooyin waaweyn looga sameeyey Kenya iyo Ethiopia ayaa u muuqda kuwo dalkooda sidaas ugu tagi doona hadaan lagu quudin gudaha dalka Somaliya halkii lagu qasbi lahaa iney wadankooda ka hayaamaan.
· admin on July 25 2011 14:10:31 · 0 Comments · 2015 Reads ·
14,581,080 unique visits